Ungayicombululi njani ifayile ye-rar | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka yakutshanje, njengoko ifayibha ibisanda kumakhaya amaninzi, kunzima ukufumana amakhaya angenalo unxibelelwano lwe-Intanethi ngokusebenzisa ifayibha yokukhanya, okoko ekwi-nucleus yedolophu, kuba ezilalini isekhona baxhomekeke kunxibelelwano lwesathelayithi ngesantya esisezantsi kakhulu.
Ukunyusa isantya sonxibelelwano kwi-Intanethi kusivumele ukuba sabelane ngeefayile ezinkulu kwi-Intanethi, ngaphandle kobungakanani bengxaki. Kodwa kuxhomekeke kuhlobo lwefayile esifuna ukwabelana ngayo, kunokwenzeka ukuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye kuye kwanyanzeleka ukuba siyicinezele ngaphambi kokuba sabelane ngayo.
Kwimarike, kwaye iminyaka emininzi, sinazo iifomathi zoxinzelelo ezahlukeneyo, nangona kunjalo, ezona zidume kakhulu bezisoloko ziyi-ARJ (kwi-MS-DOS), RAR kunye ne-ZIP. Kule nqaku ndiza kukubonisa indlela esinokwenza ngayo iifayile ze-rar kwi-PC yakho, kwi-Mac, kwithebhulethi okanye kwi-smartphone.
Ukuba kufuneka sabelane ngemifanekiso eliqela kunye okanye amaxwebhu, eyona ndlela ikhawulezayo yokwenza oko yifayile ecinezelweyo, ifayile esinokuthi emva koko siyithumele kwiinkonzo ezahlukeneyo ezikhoyo kwintengiso. thumela iifayile ezinkulu. Kwakhona Singayilayisha efini kwaye sabelane ngekhonkco ehambelana nomamkeli.
1 Ungazicimi kanjani iifayile zeRAR kwiPC
1.1 Ukuvula iRAR
1.2 I-Zip ye-8
1.3 I-Rar Zip Extractor Pro
2 Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi-Mac
2.1 I-RAR Extractor kunye ne-Expander
3 Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi-iPhone / iPad
3.1 Amaxwebhu afundwayo
3.2 Unzip isixhobo
4 Ifayile ye-Zip kunye ne-RAR yeFayile
5 Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi-Android
5.2 I-Unrar elula
5.3 I-Unrar elula, iZip kunye neZip
Ungazicimi kanjani iifayile zeRAR kwiPC
Kwiminyaka yakutshanje, iMicrosoft iyabheja, njengeGoogle kunye neApple, ukubonelela ngezicelo ezihambelana nenkqubo yokusebenza kwivenkile yayo yesicelo. Le venkile ayiniki kuphela ukhuseleko olukhulu kubo bonke abasebenzisi (bakhululekile kulo naluphi na uhlobo lwentsholongwane, i-malware, ispyware ...) kodwa ikwayiUmboniso obalaseleyo wabaphuhlisi.
Ewe kunjalo, ingxaki esinokujongana nayo kwiVenkile kaMicrosoft, kukuba usetyenziso, ubukhulu becala, luyilelwe ujongano lokuchukumisa, kude noko siqhele ukukuqhela. Nangona kuyinyani, ukuba kuvulwe kuphela iminyaka embalwa kwaye inani lezicelo ezikhoyo liselincinci, namhlanje sinokufumana usetyenziso olusivumelayo unzip iifayile zeRAR ngokukhawuleza nangokulula.
Ukuba iinguqulelo ezifumanekayo kwiVenkile ka-Microsoft azithandi ngenxa ye-interface, ungaya kwiwebhusayithi yophuhliso kwaye uthenge / ukhuphele usetyenziso lwe desktop, nangona sisicelo esingazukuchitha xesha, kuzakufuneka siqhele ukuyisebenzisa.
I-RAR Opener ivumela ukuba sivule nayiphi na ifayile kwifomathi yeRAR kwimizuzwana embalwa, iyahambelana neefomathi ze-7Z, iZIP, TAR, kunye neLZH. Kuthatha indawo encinci kwi-hard drive yakho kwaye Ayifuni imemori ukwenza umsebenzi wayo.
Khuphela iRAR Opener kwiVenkile kaMicrosoft
I-Zip eyi-8 ayisivumeli ukuba sicofe iifayile kwifomathi yeRAR, kodwa ikwasivumela decompress iifayile kwezinye iifom ezinje nge-Zip okanye i-7z, Konke oku simahla.
Khuphela i-8 Zip Lite.
I-Rar Zip Extractor Pro
I-Rar Zip Extractor Pro ixhasa zonke iifomati ezithandwayo ezikuvumela yenza kwaye ukhuphe iifayile kwiifomathi ezinje nge-7z, ZIP, RAR, CAB, TAR, ISO phakathi kwezinye iifomathi. Usebenzisa esi sicelo, uya kuba nakho ukusebenza ngoovimba be-multivolume, unciphise ugcino lonke kunye noovimba abakhethiweyo, wenze kwaye ukhuphe uvimba okhuselekileyo okhuselekileyo
Khuphela iRar Zip Extractor Pro
Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi-Mac
Zombini ngaphakathi nangaphandle kweVenkile ye-Mac App, indawo yokugcina esetyenziswayo kwiikhompyuter zeMac, sinazo inani elikhulu lezicelo esinokuthi sinciphise kwaye sicinezele iifayile kwifomathi yeRAR. Apha ngezantsi sikubonisa ukuba zeziphi ezona zicelo zibalaseleyo unzip iifayile zeRAR kwiMac.
I-RAR Extractor kunye ne-Expander
Isicelo esilula esivumela ukuba sidibanise iifayile kwiifom zeRar kunye neZip. Ayizixhasi iifayile ezikhuselweyo ngamagama okugqitha kodwa uneevolumu ezininzi.
I-RAR Extractor kunye ne-ExpanderMahala
I-decompressor sisixhobo esifanelekileyo sokukhupha zonke iifayile ngokukhawuleza ngeefomathi eziqhelekileyo (iZip, RAR, 7-zip, Tar, Gzip…). Yintoni egqithisile, ixhasa iifayile ezikhuselweyo zegama eligqithisiweyo kwaye isibonisa ujongano esinokuthi silungiselele ukuthanda kwethu.
I-Keka sesinye sezona zicelo zibalaseleyo sinokufumana namhlanje kwiVenkile ye-Mac App kwaye oko kusivumela ukuba sinxibelelane nalo naluphi na uhlobo lwefayile ecinezelweyo, nokuba uyi-7Z, ZIP, RAR, TAR, GZIP, BZIP2, XZ, LZIP, DMG, ISO, LZMA, EXE, CAB, WIM, PAX, JAR, APK, I-APPX, i-XPI, i-IPA, i-CPGZ kunye ne-CPI. Ukongeza, isivumela ukuba sinyanzelise iifayile kwifomathi: 7Z, ZIP, TAR, GZIP, BZIP2, XZ, LZIP kunye ne-ISO
Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi-iPhone / iPad
Nangona kunokubonakala kungenantsingiselo ukukwazi ukuvula iifayile zeRAR kwi-iPhone / kwi-iPad dNgenxa yokusikelwa umda okubonelelwa yinkqubo ye-Apple evaliweyoEwe sinokuyenza, oko kukuthi, ngaphandle kokushiya isicelo esivumela ukuba sikwenze kwaye sabelane ngeefayile ezingafakwanga zip kunye nezicelo ezinokuthi zivulwe.
Kuya kuba lilize ukukhupha iifayile ngaphakathi kwesicelo solu hlobo kwaye uzame ukuyivula kunye nesicelo esihambelanayo ukuba ngaphambili besingabelani ngaso. Inkqubo ibonakala inzima, kodwa nje ukuba uyifumane inomdla kakhulu.
Amaxwebhu afundwayo isicelo esifanelekileyo hayi kuphela ukudibanisa iifayile, kodwa nokugcina iifayile zalo naluphi na uhlobo, nokuba ngumculo, ividiyo, iincwadi ... Ikwasivumela ukuba sidibanise ezona fayile zixineneyo.
Isicelo esimangalisayo esivumela ukuba sidibanise iifayile kwifomathi ye-rar kunye ne-zip kunye ne-7z. Umphathi wefayile onamandla usivumela ukuba sidibanise iifayile kwiifayile kamva uwavule nangasiphi na isicelo.
unzip isixhobo (zip / rar / un7z)Mahala
Ifayile ye-Zip kunye ne-RAR yeFayile
Esi sicelo asisivumeli kuphela ukucazulula iifayile esizigcinileyo kwizixhobo zethu, kodwa ikwasivumela unzip ezo zifumaneka kwi-iCloud, iDropbox, kwiGoogle Drayivu okanye kwi-OneDrive. Ixhasa ukubethela kwefayile ye-AES 256-bit.
Ifayile ye-Zip kunye ne-RAR yeFayileMahala
Indlela yokuvula iifayile zeRAR kwi-Android
Umsebenzi we-Android, iyafana kakhulu nento esinokuyifumana kwi-PC, apho sinokufikelela khona kulwakhiwo lwefayile, esivumela ukuba sikhuphele usetyenziso lokudibanisa iifayile kulo naluphi na ulawulo ukuze emva koko sizise kwisikhombisi esihambelanayo okanye ngesicelo esifuna ukusivula, isikhangeli kulwakhiwo lwesikhombisi isixhobo.
I-RAR inokwenza i-RAR kunye ne-ZIP yogcino kunye decompress RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO kunye ne-ARJ. Ukongeza, iyasivumela ukuba silungise indawo yokugcina eyonakeleyo ye-ZIP kunye neRAR, irejista yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ivolumu yesiqhelo kunye nokubuyisa, ukubethela, indawo yokugcina eqinileyo, ukusetyenziswa kwee-CPU ezininzi zokucinezela idatha.
Umthuthukisi: I-RARLAB (epapashwe ngu-win.rar GmbH)
I-Unrar elula, njengoko igama lichaza kakuhle, Isivumela kuphela ukuba sinciphise iifayile ezixineneyo kwifomathi yeRAR, kancinci ngaphezulu. Ukuba awuthandi ukujongana neefayile ezikhuselweyo zegama eligqithisiweyo, inokuba le app uyikhangelayo.
Umthuthukisi: Ilebhu yeReson
I-Unrar elula, iZip kunye neZip
I-Unrar elula, iZip kunye neZip ivumela ukuba sikhuphe iifayile ze-rar kunye ne-zip ngokukhawuleza kwisikhangeli esakhelweyo. Ixhasa zonke iinguqulelo zoovimba abagcina izinto zakudala, iphasiwedi ekhuselweyo yogcino, kunye nokwahlulahlula iindawo zokugcina izinto ezigciniweyo. Ixhasa iifayile ezifihliweyo ze-AES
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungazicimi kanjani iifayile ze rar